Jose Mourinho Oo Sharraxay Dhibaatooyinka Haysta Ee Sababta U Noqda In Shaqooyinka Laga Caydhiyo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJose Mourinho Oo Sharraxay Dhibaatooyinka Haysta Ee Sababta U Noqda In Shaqooyinka Laga Caydhiyo
Jose Mourinho Oo Sharraxay Dhibaatooyinka Haysta Ee Sababta U Noqda In Shaqooyinka Laga Caydhiyo
July 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Jose Mourinho ayaa sharraxaad ka bixiyey dhibaatooyinka ku habsaday muddooyinkan dambe ee sababta u noqday in laga caydhiyo dhawrkii shaqo ee ugu dambeeyey, kaddib markii sida cajiibka ah loogu soo dhoweeyey magaalada Rome.
Tababaraha reer Portugal ayaa dhowaan loo magacaabay kooxda AS Roma ee waddanka Talyaaniga, waxaanu hoggaanka u qaban doonaa xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo ay u noqonayso markii labaad ee uu horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A uu macallin ka noqdo.
Waayihiisa tababarenimoi ee bilowgii xirfaddiisan ayaa waxay Mourinho ugu bilowdeen guulo joogto ahaa iyo koobab waaweyn oo uu gacanta ku dhigay, waxaanu rumaysan yahay, in taasi sabab u tahay dhibaatooyinka hadda haysta.
Jaoa Gabriel ayaa buug cusub oo uu soo saaray, waxa uu qayb ku leh Jose Mourinho oo uu gorgeeyey waayihiisa tababarenimo iyadoo, waxaana si cajiib ah uu tababaraha reer Portugal oo waraysi uu ka qaaday.
Xidhiidhka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Mourinho iyo qoraaga buuggan Jaoa Gabriel ayaa waxay keentay inuu qayb ka siiyo buuggiisa, taas oo noqotay qayb xiiso badan.
Mourinho ayuu Jaoa Gabriel weydiiyey dhibaatooyinka haysta muddooyinkan dambe ee sababa in shaqooyinka laga caydhiyo, waxaanu ku jawaabay: “Waxa aan dhibbane u noqday naftayda.”
Jose Mourinho oo sii sharraxaya waxay dhibaatadaasi tahay ayaa sheegay in laga doonayo guulihii iyo koobabkii badnaa ee uu caadaystay, kaddibna loo barbar-dhigayo waqti kasta.
Si kastaba, Mourinho ayaa Jimcihii ka degay magaalada Rome, waxaana waddooyinka waaweyn iskugu soo baxay taageereyaal tiro badan oo illaa garoonka diyaaradaha joogay, kuwaas oo ay caddahay waxa ay ka filayaan ee ah guulo iyo koobab uu u qaado.